Blaogy ho anao | 7
Ahoana Ny Fampidirana Video (YouTube - Dailymotion Etc.)
admin 11 Janoary, 2007 10:49 Fanoroana Rohy maharitra Verindrohy (trackback) (0)
Amin'izao fotoana izao, ankoatra ny sary sy soratra dia efa manomboka misy koa ny sarimihetsika izay azo ampidirina amin'ny blaogy.
Mandalo Fanamboarana Ny Blaogy.Com
admin 09 Aprily, 2007 15:40 Fanoroana Rohy maharitra Verindrohy (trackback) (0)
Mandalo fanamboarana kely ny blaogy.com amin'izao fotoana izao. Tsy ny endrika fotsiny fa ny ao anatiny mihitsy. Mbola tsy vita tanteraka ny fanamboarana na dia efa azo vakiana aza ny lahatsoratra rehetra sy ny sary.
Ezahiko vitaina androany dia holazaina anareo eto ihany ny tohiny.
Manomboka Mandeha Ny Blaogy.Com
admin 10 Aprily, 2007 16:05 Vaovao Rohy maharitra Verindrohy (trackback) (0)
Efa mandeha tsikelikely ny blaogy.com amin'izao fotoana izao taorian'ny fanavaozana izay natao omaly. Efa afaka miditra sy manoratra. Ny Endriky ny blaogy sasany no niova mandrapaha-vitan'ny fanavaozana tanteraka. (tohiny)
Olana: Solonanarana Misy Sora-Baventy =≫ Voavaha
admin 11 Aprily, 2007 14:32 Olana Rohy maharitra Verindrohy (trackback) (0)
Hitako hoe tsy misokatra ny blaogin'ireo namana izay mitondra solonanarana misy sora-baventy (ohatra Tokinao, Vanilla, DotMG sns). Eo am-pikarohana ny antony sy ny mety ho vahaolana aho io koa manàna faharetana kely.
2007-04-11 16:26:07 - Voavaha koa ity olana ity
Fampidirana Video YouTube Sns.
admin 12 Aprily, 2007 12:54 Fanoroana Rohy maharitra Verindrohy (trackback) (0)
Efa nanao filazana momba ny fampidirana video amin'ny alalan'ny YouTube sy DailyMotion ihany aho tany aloha. Amin'izao fanatsarana izao dia mora kokoa noho io voalazako io ny fomba fampidirana video eto amin'ny blaogy.com (tohiny)